कारभित्र विद्यार्थीसँग यौनसम्पर्क गर्ने शिक्षिकालाई जेल सजाय ! « News of Nepal
कारभित्र विद्यार्थीसँग यौनसम्पर्क गर्ने शिक्षिकालाई जेल सजाय !
अमेरिकाको ओहाइयोका माध्यमिक विद्यालयका एक पूर्वशिक्षिकालाई दुईजना आफ्ना विद्यार्थीसँग यौन सम्पर्क राखेको अभियोगमा दुई वर्ष लामो कारबास सजाय तोकिएको छ । ‘लाउरा डन्कर’ नामक ती शिक्षिकाले आफ्नै विद्यार्थीहरूसँग थुप्रैपटक आफ्नै घरमा र पार्कमा आफ्नै कारभित्र यौन सम्पर्क राखेको बताइएको छ । फोक्स–८ का अनुसार गत अक्टोबरमा अदालतले उनलाई दुईवटा यौन अभियोगमा दोषी ठह-याएको थियो ।
बिहीबार सुनाइएको सजायअनुसार उनलाई प्रत्येक अभियोगमा दुई वर्ष कैद तोकिएको छ । तर, उनलाई दुईवटै सजाय एकै पटकमा भुक्तानी गर्ने मौका दिइएको हो । कारागार मुक्त भइसकेपछि पनि उनलाई पाँच वर्षसम्म परीक्षणकालमा राखिने प्रहरीले जनाएको छ । तेश्रो दर्जाको यौन अपराधी ठहर गरिएकी डन्करले जीवनभरि प्रत्येक ९० दिनमा प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भइरहनुपर्ने भएको छ ।